"Iyadoo Aanay Cidiba Cadaadinayn Ayuu Kubadda Luminayaa" - Thomas Tuchel Oo Aflagaaddeeyey Xiddig Ka Tirsan Chelsea - GOOL24.NET
“Iyadoo Aanay Cidiba Cadaadinayn Ayuu Kubadda Luminayaa” – Thomas Tuchel Oo Aflagaaddeeyey Xiddig Ka Tirsan Chelsea
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa weerar afka ah ku qaaday mid kamid ah xiddigaha kooxdiisa kaddib kulankii guul-darradii xanuunka badnayd ee ay kala soo kulmeen Manchester City oo 1-0 kusoo garaacday.
Chelsea ayaa guul-darradan kaddib waxay 13 dhibcood ka dambaysaa Manchester City oo hoggaanka haysa, waxaanay Blues rajo la’aan ka noqonaysaa hammigeedii ahaa inay ku tartanto horyaalka, halka City ay 12 kulan oo xidhiidh ah oo Premier League ah ay guulo gaadhay.
Kaddib markii ay ciyaartu soo dhamaatay, Thomas Tuchel ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu weerar ku qaaday weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku oo uu sheegay inuu ‘aad uga niyad-jabay’ sidii uu u ciyaaray.
Tuchel waxa uu xusay in Lukaku uu kubadda luminayay iyadoo aanu jirin wax cadaadis ah oo haystay, halkii laga doonayay inuu si fiican u ciyaaro oo uu difaaco sharafta kooxda.
“Mararka qaarkood, waxa looga baahan yahay inuu shaqadiisa si fiican u qabto. Kubado badan ayuu khasaariyey iyadoo aanu wax cadaadis ahi haysanin, aad ayaan uga niyad-jabsanahay duruufaha noocaas oo kale ah.” Ayuu yidhi Thomas Tuchel.
Waxa uu tababaraha reer Germany xusay in fursad weyn uu khasaariyey Lukeku, waxaanu yidhi: “Wuxuu helay fursad weyn. Waxa aanu ka doonaynaa in uu noo adeego, kooxda ayaanu ka mid yahay.”
Fursadda uu Thomas Tuchel ka hadlayo ayaa waxa uu Lukaku khasaariyey ka hor intii aanu Kevin de Bruyne dhalin goolka ay Manchester City guushu ku raacday.